iPad မျိုးဆက်အသစ်ပြီးရင်း အသစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » iPad မျိုးဆက်အသစ်ပြီးရင်း အသစ်
iPad မျိုးဆက်အသစ်ပြီးရင်း အသစ်
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Mar 8, 2012 in News | 19 comments
ပိုမိုပါးလွှာပြီး အမြင်အာရုံခံစားမှု အလွန်ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်ကာ မြန်နှုန်းမြင့်လာမည့် iPad အသစ်ကို Apple က ယနေ့ စတင်မိတ်ဆက် ပွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ Yerba Buena Center for the Arts ပြုလုပ်သည့် သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ၄င်းတို့၏ iPad အသစ်ကို မိတ်ဆက် ပွဲထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Apple ၏ iPad အသစ်တွင် ယခင် iPad များနှင့် အဓိက ကွာခြားမှုအဖြစ် ပိုမိုပါးလွှာ၍ အမြင်အာရုံခံစားမှု အလွန်ကောင်းစေမည့် display နှင့် အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စေမည့် CPU တို့ ပါဝင်လာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ iPad အသစ်၏ display ကို “Retina Display” ဟူ၍ Apple က တင်စားပြောဆိုသွားသည်။ iPad အတွက် application အသစ်မျာကိုလည်း မိတ်ဆက်သွားခဲ့သည်။ အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် iPad ကို “The new iPad”ဟု Apple က သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်လိုက်သည်။
“The new iPad” ၏ အဓိက အချက်အလက်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
* Display – ပိုမိုပါးလွှာ၍ အမြင်အာရုံခံစားမှု အလွန်ကောင်းမွန်စေမည့် “Retina Display” ဟု Apple က တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ Resolution မှာ 2048 X 1536 ဖြစ်သည်။
* CPU – A5X (quad-core chip)
* Connectivity – 4G LTE network (AT&T နှင့် Verzion network တို့တွင် သုံးနိုင်သည်)
* Camera – 5-megapixel
* အသံကို မှတ်သားထားနိုင်သည့် လုံခြုံရေးစနစ် voice dictation ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်နှင့် ဂျပန် ဘာသာများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
* Storage ပမာဏအလိုက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၉၉ မှ ၈၂၉ အတွင်း ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်မှာကြားဝယ်ယူမှုကို မတ်လ ၇ ရက်တွင် စတင်လက်ခံပြီဖြစ်ကာ မတ်လ ၁၆ ရက်တွင် တရားဝင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။
မနှစ်က ကျနော်ဝယ်တော့ iPad 16GB ကို(၅၄၀၀၀၀ကျပ်)ပါ။ကျနော်ဝယ်ပြီး သုံးလလောက်
နေတော့ ipad-2ထွက်လာပြန်ရော။ခုတခါ iPad -3 နောက်သုံး၊လေးလခြားပြီး နိုင်ဝင်ဘာလမှာ
ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေနောက် လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ တခါမှ ဆုံးတော့မည်မထင်ပါ။ဒါပေမယ့် လိုချင်မိတယ်။
ပလန်းနက် ကအချက်အလက်ကလေး နည်းနည်း လွဲ သလိုဖြစ်နေတာ
ငါအပြားကြီးအသစ် ဟာ ငါအပြားကြီး-၂ထက်
ပိုမို ပါးလွှာတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါ..
စီပီယူ ကိစ္စကလည်း လွဲပါတယ်…
CPU – A5X (quad-core chip) မဟုတ်ပါ
dual core ပဲဖြစ်ပါတယ်…။
CPU ထဲက GPU လို့ခေါ်တဲ့ ဂရပ်ဖစ် ပရောဆက်ဆင်း ယူနစ် ကသာ
ငါအပြားကြီး-အသစ် ဟာ ငါအပြားကြီး-၂ ထက်
ဂရပ်ဖစ်ပိုင်း အရင်ထက် ၂ဆမြန်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
တီဂရာ ထက် အေဖိုက် ၂ဆမြန်ပြီး အေဖိုက်ထက် အေဖိုက်အိပ် က ၂ဆမြန်တဲ့အတွက်
တီဂရာထက် ၄ဆ မြန်တယ် ဆိုပါတယ်…
အားဖြည့်သွားပါတယ် ကို သန်းထွဋ်ဦးရေ ….
ဟုတ်တာပေါ့ ကိုဂီရေ…..ဒါကြောင့်လဲ Apple နဲ့ ဆိုရင် သူကြီးက ကိုဂီကိုညွှန်းတာကိုးဗျ။
ကျေးဇူးနော် ကိုဂီ။နာမည်ပေးတာမိုက်လှချည့် ကိုဂီ“ငါအပြားကြီး”တဲ့။ဟီးး
ကိုအောင်က ခုအသစ်ထွက်မယ့်ဟာ ဝယ်မှာလား။
iPad-2 ဝယ်မှာလား။အဆင်ပြေပါစေ။ကိုဂီ ရှိပေလို့ ။
၁ကထဲကဝိတ်နေတာမဝယ်ဖြစ်သေးဘူး ၃ကိုဝယ်မယ်စဉ်းစားနေတာ HTC ဖုံးနဲ့လဲသုံးနေလို့အစဉ်ပြေနေတာနဲ့
အမှတ်မှား မှာစိုးလို့ ပြန်ပြောပါရစေနော…
ကျုပ်က ပန်းသီးပိတ်သတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ….
ပိတ်သတ် ..မဟုတ်တဲ့အပြင် ပန်းသီး ကိုချဉ်တောင် ချဉ် တဲ့ လူပါ..
(ဒီရွာထဲ သဂျီးနဲ့ ကျုပ် ပန်းသီးဆို လွှတ်ချဉ်ပေါ့ ….)
ကျုပ်တချို့ ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ပြန်ကြည့်ရင် သိမှာဖြစ်ပါကြောင်း..
ကျုပ်ကတော့ ဒီလောကထဲ နေ ဒီအလုပ်နဲ့ ထမင်းစားသူဆိုတော့…
ကျကျနန ချဉ်လို့ရအောင် ကျကျနန လေ့လာထားရသကိုးဗျို့….
(ပန်းသီးမကောင်းပြောတဲ့ အေ၇းအသားတွေ့ရင် …ကျုပ် ကြပ်ပေးသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့
ကြို ၀န်ခံထားရတာဗျို့ …..)
ကိုယ့်ဆြာတို့ရဲ့ ပါဆက်ပ်ရှင်းပဲမို့ …. အကြံမပြုလိုကြောင်း…..
ကျုပ်ကတော့ မကြိုက်လို့ မသုံးပါကြောင်း…
ရွာသားအချင်းချင်းမို့…. သိတာလေး ရှဲတာသာဖြစ်ပါကြောင်း..
ဝင်ဒိုးမိုဘိုင်းကိုသုံးလာတာ ၈နှစ်နီးပါးပဲ ပန်းသီးအမ်ပီ၃ ၈၀ဂျီဘီကိုဒေါ့သုံးဘူးတယ် ၅နှစ်သုံးပြီးပျက်သွားတာ ပြင်ဒေါ့ဈေးကြီးလို့မပြင်ပဲဒီအတိုင်းထားတာ (သံဝေဂမရသေးပါ) မြန်မာပြည်ကလူတွေက ပန်းသီးမှပန်းသီးနော်
ရှမ်းပြည်သားတို့ကတော့ ပန်းသီးအတုပဲသုံးတော့မယ် ဒါပေမယ့်ပန်သီးအစစ်နီးနီးကောင်းပါတယ်။
တရုတ်ပန်းသီး တရုတ်ငါအပြားကြီး (ဂီဂိ လေသံဖြင့်) ခုနှစ်သောင်းခွဲပဲ အန်တာနိုက်လဲရတယ် အိမ်သာနက်လဲရတယ်
ဒုတ်ခဲလဲကောင်းတယ်။ ရှမ်းပြည်သားကျောင်းတက်နေတုန်းက ၀ိုင်ယာလက်ချိတ်ပြီးအဆောင်မှာတုန်းဖူးတယ်။
သူနယ်ချင်းတောင်းလို့လှူခဲ့လိုက်တာ ………. ခုလဲနောက်တစ်ပြားထပ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။အစစ်ကိုတော့ဘယ်မှီမလဲနော်၊ အလုပ်=ဂျော့ သံမဏိ=စတီး အဆောင်=၀ပ် က လူပါးကြီး
အမလေးဗျာ ဟုတ်ပဟုတ် ကန့် သတ်ချက်တွေများတဲ့ ပန်းသီးကို ကျနော်လဲ
မကြိုက်ပါဘူး။Android ဒါမှမဟုတ် window phone လေးဘဲကောင်းမယ်
ဒါနဲ့ ဗျာ ကိုယ့်အကိုတွေ စကားတွေမပီကြတော့ဘူးနော်။
မိုက်လုံးကြီး သကိုး ….
မဆီမဆိုင်ဝင် အနှုတ်ပေးတဲ့ ငနာကရှိသေးသကိုး။
တွေ့သလောက်တော့ လိုက်စိမ်းခဲ့ပါရဲ့ဗျို့ ….
ပိုကောင်းတဲ့မနက်ဖြန်ကို ရှိပ်ပ် လုပ်သွားမယ်လို့
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်အားပေးနိုင် မကြိုက်တာ ဝေဖန်နိုင်ပါကြောင်း
ခြေခြေမြစ်မြစ်တော့ ရှိဖို့လိုပါကြောင်း …..
ဘလိတ် ၅ချပ်ပါတဲ့ ပန်းသီးကင်မလာ ဟာ f2.4 ဖြစ်တာကြောင့်
အတော် အပေါက်ကျယ်တဲ့ ကင်မလာ ဖြစ်ပါကြောင်း
၅မဂ္ဂါ ပစ်ဇယ် မို့ လက်တွန့်နေသူများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
မဂ္ဂါပစ်ဇယ်လ် တခုတည်းနဲ့ ပုံတပုံရဲ့ ခွာလ်ထီ ကို ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်စကောင်းပါကြောင်း
အပေါ်က လူတွေကို အားကျလိုက်ပါဘိ …..
ပန်းသီး စာလုံးချင်းကို ထပ်လို့ ..
ဂယ်ပဲ … များတို့ကတော့ ပန်းသီး ပြောနဲ့ ..
ပန်း တောင် ဝယ်ပန်နိုင်သေးဘူးတော်တို့ရေ့ …….
ကိုဂီရေ ကျေးဇူးဗျို့ ။
ကိုအံစာတုံးကတော့ ဗျာ နောက်နေပီ။
ပန်းသီးက တခြမ်းပဲ့ နေပီဗျ။ဟီးးး
ဟဲ..ဟဲ…စကားအတင်းစပ် အခု ကော်မန့်ကို Macbook Pro နဲ့ Lion ပေါ်ကနေမန့်လိုက်တာ…
ပန်းသီးကထုတ်တဲ့ Hardware တွေလို ကောင်းတဲ့ Hardware တွေကို တခြား Brand တွေကထုတ်နိုင်တယ်
အသုံးရအလွယ်ဆုံးနဲ့ Stable အဖြစ်ဆုံး OS ကိုတော့ ဂီဂီလေသံအတိုင်းပြောရရင်…
အပေါ့ရော၊ စက်ရုပ်ရောက ခြေဖျားတောင်မမီသေးဘူးဆိုတာတော့ ပန်းသီးပရိတ်သတ်မဟုတ်တဲ့လူတွေ
ခုမှ မြင်လို့ ခုမှ မန့်ဖြစ်တာဗျ..
ညည့် သိပ်နက်နေလို့ …..
မငြင်းပါဘူး …. foratypical point of view
ကျနော်က သို့သော် ဆိုတာရဲ့နောက်ဖက်……အပြင်
သို့မဟုတ် ဆိုတဲ့ အပိုင်းကိုပါ တူးဆွချင်တာပါ….
ကျနော့်မှာ ဘ၀တွေနဲ့ ရင်းထားတဲ့ case study တချို့ ရှိပါရဲ့….
ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် ကိုfatty cat ရေ။
Mac Book ကတော့လိုချင်လွန်းလို့ ။သို့ သော်
ကျနော် ကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်ပါ ဟု